Would Australia's policy stop boats to Europe?
A British newspaper columnist has declared that it's time for Europe "to get Australian" and emulate the tough Antipodean approach to illegal migrants comi...
စစ်ကိုင်းမြို့ရှိ ညောင်ပင်များ ကန်တော့ထိုးသည့် ပုံစံများဖြစ်ပေါ်
စစ်ကိုင်းမြို့၊ ဧပြီ ၂၂ စစ်ကိုင်းမြို့တွင် ဧပြီ(၁၈)ရက် (နှစ်ဆန်း ၂ရက်)က မိုးသက်လေပြင်းများ ကျရောက်ခဲ့ပြီးနောက် စစ်ကိုင်းမြို့၊ ဒါး ၀ယ်ဈေး တိုက်နယ်၊ ကျောင်...
Dontrell Stephens was paralyzed from the waist down after the 2013 shooting. He was shot by Palm Beach County Sheriff's Office's Adam Lin in Florida when h...
Thousands of Turks commemorate centenary of 1915 mass killings of Armenians, despite Ankara's refusal to admit genocide.
ပြည်သူ့ အကျိုးကို ဆောင်ရွက် ပေးမည် ဟု ကတိပေးပြီး မဲများရယူကာ လွှတ်တော်ထဲတွင် လစာအခန့်သား ယူကာ အိပ်ငိုက်နေသည့် အမတ်များကို မဲပေးခဲ့ မိသည့် ဖြစ်ရပ်ကို ပြန် ...
Royal Enfield tanks up for global push
Cult bike maker Royal Enfield is aggressively readying itself foraglobal push to attain its target of becoming the top middle weight motorcycle manufactu...
Editorial: Congress should not abdicate its duty on war
AFTER HOUSE Republican leaders announced last week that they would not act on President Obama’s request for an authorization of military force against the ...
မြန်မာနိုင်ငံကနေ ​ရောက်ရှိလာတဲ့ ​ဒုက္ခသည်တွေကြောင့် ​သြစတြေးလျ ​နိုင်ငံက ​မြို့တစ်မြို့မှာ ​စီးပွားရေး ​တိုးတက်မှုတွေ ​ဖြစ်နေပါတယ်။
ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ အရင်ရက်က တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ ကိုးကန့်ဒေသမှာ ဒီကနေ့မှာတော့ ငြိမ်သက်နေပေမဲ့ တိုက်ပွဲတွေဟာ ဆက်လက် ပြင်းထန်တဲ့ အခြေအနေရှိနေပါတယ်။ ဒီလ ၂၃ရ...
In Commemoration of Hanthawaddy Win Tin
This is an exclusive video of the commemoration ceremony of the co-founder of the National League for Democracy (NLD), Writer, Journalists and former polit...